त्रिवेणी पर्यटनको गन्तब्य – केबी मसाल
Writer | Viewer | Journalist
प्रीति कन्भटर तथा युनिकोट प्रिति कन्भर्टर :: अनलाईन खबर :: अन्नपूर्ण पोष्ट :: कान्तिपुर अनलाइन :: आर्थक अभियान
गोरखापत्र अनलाइन :: नयाँ पत्रिका :: नयाँ युगबोध दैनिक :: नागरिक अनलाइन :: रातोपाटी :: सेतोपाटी :: बाह्रखरी
यसपाली – राप्ती समाचार स्तम्भ
मैले देखेको, भोगेको
त्रिवेणी पर्यटनको गन्तब्य
September 18, 2017 KB Mashal0Comment
हामी अहिले ग्रामीण पर्यटन कुरा गर्दछौ । ग्रामीण पर्यटनको उद्योग हुनु पर्दछ पनि भन्दछौ । नेता कार्यकर्ता, समाजसेवी, पत्रकार र शिक्षकहरु को बोलिमानै ग्रामीण पर्यटनका कुरा उब्जिने गरेको छ । तर ब्यबहारमा भने ग्रामीण पर्यटन फरक पाइन्छ । किनकी हामी मध्य धेरैजना आफ्नै प्रदेश र जिल्ला भित्रका धार्मीक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा जानकार छैनौ ।
पर्यटन शब्दको शाब्दीक अर्थ भ्रमण हो । कुनै स्थानबाट अर्को स्थलहरुमा गरिने भ्रमणलाई पर्यटन भनिन्छ । यसरी भ्रमण गर्दा संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, रहन सहन र जीवनशैलीको बारेमा अध्ययन हुन्छ । भ्रमण बाट नै ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको लागी धार्मीक, प्रकृति र संस्कृतिमा स्थलहरु धेरै छन । अहिले पर्यटकहरु शहरीक्षेत्र भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जान चाहान्छन । शहरमा हुने धुवाँ, धुलो, फोहोर जस्ता प्रतिकूल वातावरणका कारण पर्यटकहरुले ग्रामीण वातावरण रुचाउन थालेका छन ।
नजिकको तिर्थ हेला भने जस्तै, हामी नेपाली आफ्नो धर्म, सस्कृती अनुसार धर्मको लागि भारतको विभिन्न प्रान्तमा भएका धार्मीक स्थलमा पुग्ने गर्दछौ । तर आफ्नो देश र प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक मठ मन्दिर, नदी र धामको धार्मीक भ्रमण भने हामी गर्दैनौ । भारतका कयौ धार्मीक तिर्थस्थलहरु नेपाल कै हिमाल र पहाड वाट वगेका नदीहरु गंगा, भागिरथी, यमुना जस्ता नदीको किनारमा रहेका छन । विभिन्न नामका ती तिर्थस्थल मा नेपालीहरु पुग्ने गर्दछन । आफ्नो मनोकाक्षा पुरा भयो भनि आत्मा सन्तुष्टि लिने गर्दछन । तर तिनै नेपालीहरु आफ्नो देश भित्रका धार्मीक स्थलमा भ्रमण अवलोकन गर्ने वानी भने छैन ।
धवलागिरी, गण्डकी र वागमती अन्चलको भू–वनोटमा रहेको हिमाल, हिमताल र झरनाहरुले काली, सेती, मादी, मरस्याङदी, चेपे, वुढिगण्डकी र त्रिशुली मिलेर वन्ने नारापणी नदी बनेको छ । चितवन र नवलपरासी जिल्लाको भारतिय सिमा त्रिवेणी पुगे पछि नारायणी नदी भारतिय भूमीमा वग्दछ । कालीनदी को उदगमस्थल दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथ, मनाङ जिल्लाको तिलिचो हिमतालबाट सुरु भएको मरस्याङदी, गोरखा र लमजुङ जिल्लाको सिमामा रहेको दुध पोखरी वाट सुरु भएको चेपे, गोरखा र धादीङ जिल्लाको हिमशिखर बाट उत्पन्न भएको वुढीगंगा र रसुवा जिल्लामा पर्ने गोसाईकुण्डको पानीवाट सुरुहुने त्रिशुली नदीहरुको पानीलाई धार्मीकरुपले पवित्र मानीन्छ । यी नदी नै देवघाट हुदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणी पुग्दछ । त्रिवेणी सम्म पुग्दा नारायणी नदीमा कयौ घाटहरु पर्दछन । धार्मीक आस्थाका कारण सवै घाट महत्वपूर्ण मानीएपनि त्रिवेणी धामलाई विशेष महत्वका साथ लिने गरिन्छ ।
चितवन जिल्लाको माडी उपत्यका जस्लाई रिउ उपत्यका पनि भन्ने गरिन्छ । यो उपत्यकाको अधिकांश भूभाग निकुञ्जमा पर्दछ । माडी उपत्यकाको उत्तरमा चुरे श्रृखला र दक्षिणमा सोमेश्वर पर्वत पर्दछ । यहि क्षेत्रबाट बाट बग्दै आउने सोना अर्थात स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा अर्थात तमसा र नारायणी नदीको संगमस्थल हो त्रिवेणी धाम । नारायणी, स्वर्णभद्रा र पूर्णभद्रा नदीको सगंम स्थलको रुपमा रहेको त्रिवेणीमा मोक्ष प्राप्तिका लागि विशेष गरी माघे औंशीमा स्नान गर्ने तिर्थयात्री लाखौको सख्यामा हुने गर्दछ । यो स्थल अहिले मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश नं. ४ मा पर्दछ । साविक त्रिवेणी सुस्ताको ६ र ७ अहिले विनयी मा मिलाएर विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका भएको छ । यो गाउँपालिका त्रिवेणी देखि माथीको पुरै महाभारतको बस्ती दाउन्ने देवीको धार्मीकस्थल समेत पर्दछ । भारतिय सिमा भएर यो ४ नं. प्रदेशले चिनको नाका कोरला सम्म जोडिएको पनि छ ।
त्रिवेणीमा आदिकवि वाल्मीकि आश्रम, गजेन्द्र र गोहीको युद्धमा भक्तवत्सल नारायणले गजेन्द्रलाई रक्षा गरेको गजेन्द्रमोक्ष धाम लगायतका अनेकौँ महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहेको छ । त्रिवेणी धाम नेपाल र भारतको सीमानामा पर्दछ । त्रिवेणीमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका धार्मीक आस्थाका मानिसहरु पुग्ने गर्दछन । त्रिवेणी धामलाई हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ । यस स्थानमा स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा र नारायणीको संगम रहेकाले यस स्थानलाई त्रिवेणी भनिएको हो । यी नदीलाई सोना, पञ्चा र नारायणी नदी पनि भनिने गरिन्छ । त्रिवेणी क्षेत्र त्रिकुट पर्वतको बिच भागमा अवस्थित छ । यी त्रिकुट पर्वत मध्ये एउटा पर्वत स्वर्णस्वरुप, अर्को पर्वत ताम्रस्वरुप र अर्को लोह्यस्वरुपको मानिन्छ । त्यसैले स्वर्णस्वरुप पर्वतको काखबाट बहने नदीलाई स्वर्णभद्रा, ताम्रस्वरुप पर्वतको काखबाट बहने नदीलाई पूर्णभद्रा वा तमसा र लोह्यस्वरुप पर्वतको काखबाट बहने नदीलाई कृष्ण गण्डकी अथवा नारायणी नदी मानिन्छ ।
त्रिवेणी धामको बारेमा वराह पुराण र स्कन्द पुराणको हिमवत्खण्डले पनि वर्णन गरेको पाइन्छ । त्रिवेणी धाममा गजेन्द्रमोक्ष, भक्तेश्वर शिव मन्दिर, लक्ष्मी वेंकटेश्वर मन्दिर, नागाबाबा कुटी, राधाकृष्ण मन्दिर, कोटिहोम यज्ञशाला, संस्कृत विद्यालय छन् । यो स्थान प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र धार्मिक रुपमा महत्वपूर्ण स्थल मानिन्छ । त्रिवेणीमा स्नान, पितृतर्पण, श्राद्ध, उपनयन, कर्णभेदन, अन्नप्राशन, चूडाकर्म तथा अन्य संस्कारहरु सम्पन्न गर्ने गरिन्छ ।
त्रिवेणी धामको भ्रमण पछि नारायणी नदी ढुङगाबाट चितवनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि राममायण कालिन ग्रन्थसंग मिल्ने वाल्मिकी आश्रममा पुग्न सकिन्छ । वाल्मीकि आश्रम त्रिवेणी क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थल हो । यो आश्रम त्रिवेणीबाट लगभग ४ किलोमिटर पूर्व दक्षिणतर्फ भारतको सीमा नजिकै चितवन जिल्लामा पर्दछ । नारायणी नदी ढुङगा बाट तरेपछि जगंलको बाटो भएर वाल्मिकी आश्रम पुग्न सकिन्छ । वाल्मिकी आश्रममा पौराणिक राममायणसंग जोडिएको मिल्दा जुल्दा प्राचिन अवशेषहरु देख्न पाइन्छ । वाल्मिकी आश्रममा त्रेतायुगको कथा प्रशगं जोडिएको छ । रत्नाकरले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर महर्षि वाल्मिकी बनेका थिए । वाल्मिकी क्षेत्रसँग सीता र लव–कुशको प्रसग समेत जोडिएको छ । नारायणी नदीको काखमा चितवन निकुञ्ज भित्र रहेका वन्यजन्तु र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका कारण वाल्मिकी आश्रम आफैँमा रमणिय छ ।
वाल्मिकी आश्रम आसपासमा धेरै पौराणिक कुरा पाइन्छन् । अमृत कुवा, लवकुशले घोडा बाँधेको खम्बा छ । सीताले प्रयोग गरेको सिलौटो छ । त्यहा पुग्नेमानिसहरुले सिलौटो पिसेको फोटो समेत खिच्ने गर्दछन । नजिकै वाल्मिकीको समाधिस्थल छ । लवकुशको जन्मस्थल, शिक्षादीक्षा दिएको ठाउँ, उनीहरुले खेलेको स्थान र आकर्षक विष्णु चक्र पनि छ । वाल्मिकीले रामायण यहीँ बसेर लेखेको भनाइ छ । अठासी हजार ऋषिले हवन गरेको कुण्ड पनि देख्न सकिन्छ । वाल्मिकी आश्रममा पुगेकी सीताले लवकुशलाई त्यहि क्षेत्रमा जन्म दिएकी थिइन् । उनीहरुको शिक्षा दीक्षा समेत त्यसै क्षेत्रमा भएको थियो । सोही ठाउँबाट सीता पातल भासिएको भन्ने भनाइ समेत छ ।
साना सवारी साधन भएका मानिस वाल्मिकी आश्रम जान भारतको भूमिबाट जान सजिलो हुन्छ । त्रिवेणी क्षेत्रको दशगजाबाट १० किलो मिटर भारतीय भूमिको यात्रापछि वाल्मिकी आश्रम पुगिन्छ । भारतिय भूमीको बाटो जादा गण्डक ब्यारेजको (पुल) तर्नु पर्दछ । पुलपारि भारतको बिहार चम्पारन जिल्लाको भैसालोटन पर्दछ । भैसालोटनबाट वाल्मिकी आश्रम १० किलो मिटर उत्तर पूर्वमा पर्दछ । वाल्मिकी आश्रम स्थल भौगोलिक रुपमा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र चुरे पहाडको दक्षिण नेपाल–भारत सीमानामा पर्दछ ।
त्रिवेणी धाम पुग्दा भारतले निर्माण गरेको भैसालोटनको गण्डक नहरको पुल पनि हेर्न सकिन्छ । त्रिवेणीको एकै स्थानबाट धार्मीक, सास्कृतीक, पुरातात्विक महत्वको विषयमा अध्यन गर्न सकिन्छ । अध्यनशिल ग्रामीण पर्यटनहरुको लागि यो स्थान महत्वपूर्ण मानीन्छ । त्रिवेणीमा धार्मीक गतिविधि मात्र होइन गण्डक वाधले वनाएको तालले त्रिवेणी पुग्ने ग्रामीण पर्यटक अथवा धार्मीक आस्थाका मानिसहरुलाई आनन्द दिलाउछ । त्रिवेणीमा नारायणी नदीको स्नान, शिवालय मन्दिर को दर्शन र त्यहा रहेका अन्य देवी देवताको मन्दिरको दर्शन गर्नुको साथै गण्डक नहरले वनाएको नारायणी नदीको तालमा ढुङगाबाट अर्को आनन्द लिन सकिन्छ ।
वाल्मिकी आश्रम वाहेक त्रिवेणी पुग्दा हेर्नपर्ने अर्को तिर्थस्थल हो भारतको भैसालोटन तर्फको जटाशंङकर मन्दिर । जटाशङकर मन्दिरको दर्शन गरेपछि नरदेवी र लवकुश घाट हुदै नेपाल कै भूमीमा रहेको गढीमाई, शिवपुर, केउलानीमाई, लक्ष्मीनारायण र राधाकृष्ण मन्दिर हुदै त्रिवेणीको सुरुमा दर्शन गरेको शिवालयको मन्दिरमा पुगे पछि धार्मीक यात्रा समाप्त हुन्छ । त्रिवेणीधामका यी सवै स्थलहरु भ्रमण गर्दा १५ किलोमिटरको यात्रा गर्नु पर्दछ । त्यसैले यो यात्रालाई पन्चकोशि यात्रा पनि भनिन्छ । त्रिवेणीधाममा अन्य वेला भन्दा माघे सक्रान्तीको वेला यात्रुहरुको भिड हुने गर्दछ । चितवनको देवघाट र पाल्पा, गुल्मी र स्याङजाको संगम स्थल रिडी को दर्शन गरेपछि त्रिवेणी जानु पर्दछ भन्ने धार्मीक मान्यता रहेको छ । त्यसैले माघेसक्रान्तीको वेला त्रिवेणीधाममा जाने मानीसहरु को सख्या पनि धेरै हुन्छ ।
आजभोली त्रिवेणी धार्मीक दृष्टिकोणले मात्र नभएर वुटवल, भैरहवा र भारतका विभिन्नस्थान बाट पिकनिकमा समेत विद्यार्थी एवं अन्य पेशाका मानिसहरु जाने गर्दछन । पिकनिक मा जाने मानीसहरु त्रिवेणीका ताजा माच्छा अनि अन्य परिकार लिएर ढुङगाको सयरमा आनन्दलिदै खान रुचाउछन । जसले गर्दा त्रिवेणी जाने मानीसहरुको सख्या दिनप्रतिदिन बढदै गएको छ । नेपालका हिमनदीहरु मध्य नारायणी नदी ऐतिहासिक धार्मीक ग्रन्थसंग जोडिएको छ । नारायणी नदीमा मिसिने काली, सेती, मरस्याङ्दी र त्रिशुली जस्ता नदीहरुको शीरमा धार्मीकस्थल हुनाले पनि यो नदी अन्य नदी भन्दा पवित्र मानीन्छ । कालीनदीको शीर दामोदरकुण्ड, मुक्तिनाथ र त्रिशुली नदीको उदगम स्थल गोसाईकुण्ड मात्र होइन नारायणी नदीको सहायक नदी जती छन ती नदीहरुमा सयौ स्थानमा पवित्र घाट र शिवालयका मन्दिरहरु छन । देवघाट, गोसाईकुण्ड, मुक्तिनाथ जस्ता धार्मीकस्थल नेपालको मात्र नभएर छिमेकी मुलुकका हिन्दु एवं वौद्ध मार्गीहरुको आस्थाको केन्द्र विन्दु बनेको छ । नारायणी नदी को पानी भारतको भूमीमा पुगेपछि पनि पवित्र गंगाको नामले प्रख्यात छ । जसको कारण त्रिवेणीमा वर्षेनी लाखौको सख्यामा भारतीय नागरिकहरु पनि दर्शन र भ्रमण गर्नको लागी आउने गर्दछन ।
त्रिवेणी भ्रमण अवलोकन केवल धार्मीक र पर्यटकिय रुपले मात्र नभएर राजनैतिक रुपले पनि उत्तिकै महत्व मानीन्छ । राजनैतिक प्रति चासो राख्ने व्यक्तिहरुको लागी भारतले निर्माण गरेको गण्डक नहरको वाधको बारेमा स्थलगत अध्यन गर्न सकिन्छ । टि.भी.,रेडियो र पत्रपत्रिका वाट नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता सिमाको वारेमा जानकारी पाएका मानीसहरुलाई स्थलगत अध्यन, अवलोकन गर्न सकिन्छ । राजमार्ग दाया वाया को मात्र नवलपरासी जिल्ला देखेका मानीसहरुले तराईको ग्रामीण वस्ति र गाउवासीको समस्या अनि सिमा क्षेत्रको समस्या वुझन समेत पनि त्रिवेणीको भ्रमणले अवसर दिन्छ । धार्मीक दृष्टिकोणले त्रिवेणीको भ्रमण जति राभ्रो मानिन्छ, त्यो भन्दा सिमाको वारेमा अध्यन गर्ने जो कोहि नेपालीहरुको लागी महत्वपूर्ण यात्रा त्रिवेणीको यात्राले दिने गर्दछ ।
अहिले त्रिवेणी–अरुङखोला नारायणी नदीको तिरै तिर मोटर मार्ग निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसको दुरी करिव २५ कि.मी रहेको छ । यो मार्ग पुरा भयो भने नारायणघाट तिरबाट त्रिवेणी जानको लागी छोटो दुरी पर्दछ । वुटवल देखि ४५ किलो मिटर र नारायणघाट देखि ७० किलो मिटर को विचमा पर्ने वर्दघाट वजारवाट त्रिवेणीधाम २८ किलो मिटरको दूरीमा पर्दछ । पश्चिम नेपालका मानिसहरु भैरहवा–परासी भएर पनि त्रिवेणी जान सकिन्छ । भैरहवा–परासी १७ कि.मि र परासी–चौपट्टा १४ कि.मिं यात्रा गरेपछि बर्दघाट त्रिवेणी पुग्ने सडक भेटिन्छ ।
मिती ः– २०७४ जेष्ठ ८ गते दाङ
← घान्द्रुक पर्यटनको गन्तब्य
देवीकोट ग्रामीण पर्यटनको गन्तब्य →
ताजा अपडेट शीर्षकहरु
इतिहासमा लुकेको पर्यटन मकवानपुरगढी
पर्या–पर्यटन र धारापानीको विकास
सिजा पुग्नै पर्ने ठाउ हो !
किन चर्चामा छ ! जुम्लाको मार्सी धान
मृगको दूध पिएर हुर्केकी रुरुकन्या
ग्रामीण पर्यटनको लागि रम्भादेवी
घलेगाउँ नेपालकै पहिलो ‘स्मार्ट भिलेज’
सहिद दिवस र यस भित्रका कुरा
पर्यटनको हब बन्दै चितवनको माडी
गौंमुखी पर्यटनको गन्तब्य
प्रतिक्रिया गरिएका पछिल्ला शीर्षकहरु
kirtan rai on गाई पाल्ने भए एकपटक गोरखा पुगौ
Madhu Soodan Poudyal on भारतको नेपालप्रति गिद्दे दृष्टि
gopal regmi on विश्व रेडियो दिवस र नेपालमा रेडियो
Gurudatta Gyawali on देवघाटदेखि मुक्तिनाथ सम्म ……५
ढोरपाटन पोलिक्लिनिक on समय आयो, ढोरपाटन जाने हो कि ?
प्रकाशमान on पुग्नै पर्ने ठाउ हो कुपिण्डे दह
chandrastha on खोलाको किनार, जगंलको बास, कति गर्ने नेताको आस
अभिलेखालय Select Month January 2019 September 2018 August 2018 July 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 September 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013
Copyright © 2022 केबी मसाल. All rights reserved. Customized by CSS.